६ महिना सँगै बसेकाले छाडेर भाग्यो, अब कस्ले दिन्छ मलाइ साथ? सहारा खोज्दै यी चेली (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > ६ महिना सँगै बसेकाले छाडेर भाग्यो, अब कस्ले दिन्छ मलाइ साथ? सहारा खोज्दै यी चेली (भिडियो हेर्नुस्)
फेसवुक म्यासेन्जरमा केहि समय अगाडिदेखि सामान्य कुराकानी हुन्छ । विस्तारै त्यो सामान्य कुराकानी असामान्य हुँदै जान्छ । उनीहरु फेसवुक म्यासेन्जरवाट नजिक भएका उनीहरु प्रेममा पुग्छन् । भेटघाट हुन्छ र विवाह गर्ने भन्दै ६ महिना संगै एउटा कोठामा बस्छन् । तर केही दिन यता उनी आफ्नो दिदीको घर जान भन्दै हिडेका उनी अहिले कहाँ छन् थाहा छैन । मनमाया तामागं र भिम सुवेदीबीचको सम्बन्धमा यस्ता कहानी भएको हो ।
मनमायाको घर नुवाकोट हो भने भिमको घर उदयपुर भालमन्दी हो । विवाह गर्ने सल्लाहले नै कोठा लिएर बसेका उनीहरुको चिनजान फेसवुक मार्फत भएको हो । जतिवेला फेसवुकमा कुराकानी हुन्थ्यो भिम विदेशमा थिए । उनी विदेश वहराइनवाट नेपाल आएपछि विवाह गरेर संगै बसेका हुन् । तर उनीहरुको औपचारीक विवाह भएको कुनै प्रमाण भने छैनन् । सुरुमा भिमले आफु विवाहित भएको भनेर मनमायालाई भनेका थिए तर भिमको विवाह भएको रहेनछ ।
करेन्टले दुबै हात गुमाएकि रूपाकाे घर पुग्दा यस्तो देखियो… यति मिठो स्वरकि धनि रूपाकाे यस्तो छ रहर… भिडियो सहित